तीन नेतापुत्रको भाते बैठक : कांग्रेसमा बन्याे नयाँ समीकरण - News 88 Post
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका युवराज भनेर चिनिने तीन नेतापुत्र सशांक कोइराला, प्रकाशमान सिंह र विमलेन्द्र निधि केही समययता दिनहुँजसो भात बैठक गरिरहेका छन् । उनीहरुले नेतृत्वको पुस्तान्तरणका लागि नयाँ समीकरणको प्रयास गरिरहेको बताएका छन् ।
कांग्रेसको संगठनमा ताजापन, नेतृत्वमा पुस्तान्तरण र युवा पंक्तिको वर्चस्व आजको आवश्यकता पनि हो । नेतृत्वमा वैचारिक स्पष्टता र सांगठनिक गतिविधिमा जीवन्तताबिना कांग्रेसले कम्युनिस्टहरुको मुकाबिला गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन । खासगरी प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको रणनीतिक चातुर्यका सामु बाँकी सबै नेता एवं राजनीतिक दल छायाँमा परेका छन् । ओलीको विशालकाय राजनीतिक व्यक्तिको सामना गर्न पनि कांग्रेसको प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउनु आवश्यक छ ।
यस हिसाबले तीन प्रभावशाली नेताहरु कांग्रेसको भविष्यलाई लिएर सामूहिक चिन्तनमा केन्द्रित हुन्छन् भने त्यसको सह्राहना नै गर्नुपर्छ । तर, यसमा अमिल्दो पक्ष के छ भने तीनै जना सभापतिका आकांक्षी हुन् । आफ्नो समूहका नेताविरुद्ध सभापतिको उम्मेदवारी घोषणा गरेर फरक समूहका सभापतिकै उम्मेदवारसँग कसरी समीकरण मिल्छ ? के उनीहरुले शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेलबाहेक जो सभापति भए पनि हुन्छ भनेर कसम खाएका छन् ? अथवा, तीनजनामध्ये जो सभापति भए पनि एकले अर्कालाई स्वीकार गर्ने भित्री सहमति कायम गरेका छन् ? होइन भने एकले अर्कोलाई देखी नसहने तीन नेताहरु नयाँ शक्ति समीकरण निर्माणमा एक मत हुन्छन् भन्ने के आधार ?
बीपी कोइराला, गणेशमान सिंह र महेन्द्रनारायण निधिका छोराहरु तीनैजना राजनीतिक रुपमा क्रियाशील हुँदाहुँदै आफ्नो क्षमताभन्दा बढी पैतृक विरासतको आडमा नेतृत्वमा स्थापित हुन कोसिस गरिरहेका छन् । यिनीहरुको तथाकथित विरासतमा आधारित दावा आफैमा भुत्ते भइसकेको छ । विरासत राजनीतिक मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त र दर्शनमार्फत् हस्तान्तरण हुने हो । न कि वंशमार्फत् । विरासत आचरण र व्यवहारबाट पुष्टि हुने हो । न कि भाषण र स्वयंकथनबाट ।
बीपीका गुण सशांकमा भए पो कांग्रेस कार्यकर्ताले विरासतलाई मान्यता दिन्छन् । गणेशमानको निष्ठा प्रकाशमानमा र महेन्द्रनारायणको महत्ता विमलेन्द्रमा देखिए पो अनुयायीले आत्मसात् गर्छन् । राजनीतिमा निजी लाभहानिका लागि पैतृक विरासतको दावा गर्नु भनेको आफ्नै अयोग्यता र लाचारी प्रदर्शन गर्नु हो ।
नयाँ समीकरणको जतिसुकै दावी गरिए पनि यी तीन पुत्र एकले अर्कालाई नेता स्वीकार गर्छन् भन्ने कुनै आधार छैन । त्यसैले तीन जना भेला भएर फोटो खिचाएर आआफ्नो समूहमा आफ्नो दावी बलियो बनाउने उद्देश्य मात्र देखिन्छ । आफ्नो खेमाभित्र सर्वसम्मत हुन नसक्ने भएपछि गुटमा दबाब सिर्जना गर्न उनीहरुले अपनाएको यो आत्मघाती बाटो हो । यसले उनीहरुको दावी झनै कमजोर देखिने निश्चित छ ।
जसले जेसुकै भने पनि अहिले कांग्रेसमा सभापति शेरबहादुर देउवाको विकल्प जन्मिइसकेको छैन । देउवालाई चुनौती दिने दोस्रो नेता नहुँदा निधि मात्र होइन, सशांकदेखि प्रकाशशमानसम्मले देउवासँगै समीकरण मिलाउने दाउ हेरेको पाइन्छ । देउवा खेमाबाट विमलेन्द्रलाई टाढा पुर्याउन सकेमा आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्न सकिने सशांक र प्रकाशमानको बुझाइ छ । विगतमा महन्थ ठाकुरलाई कांग्रेसको मूलधारे राजनीतिबाट जसरी पाखा लगाइयो, अहिले विमलेन्द्रलाई पनि त्यसरी नै पाखा लगाउने कोसिस भइरहेको छ । त्यस्तै रणनीतिको औजार विमलेन्द्र स्वयं बनिरहेको उनका पछिल्ला गतिविधिले देखाउँदै छ ।
विमलेन्द्रले यो कुरा जति छिटो बुझ्छन्, दुर्घटना त्यति नै चाँडो टर्नेछ । होइन भने उनका लागि देउवाले धेरै समय काँध थापिरहन सक्नेछैनन् । विमलेन्द्रले नै तत्काल देउवालाई समर्थन गरी पार्टी सभापतिमा समर्थन गर्ने, भोलि प्रधानमन्त्री बनाउने र आफू कार्यवाहक सभापति बन्ने मार्गचित्रमा अघि बढ्ने तत्परता देखाउनु नै उनको हितमा देखिन्छ । तत्काललाई कांग्रेसको हित पनि यसैमा निहित छ ।
प्रचण्डसँग सँगै बसेर खाएकाे मार्सी चामलकाे भातले ओलीकाे पेट काटेपछि …